Ifenisha yesibhedlela ehamba phambili zero-maintenance design stretcher actuator self-Continued hydraulic actuator Manufacturer and Factory | I-Power-Packer
Khuthazwa ukusebenza kwethu
Sinikeza uhla oluphelele lwe-manual-hydraulic kanye ne-electro-hydraulic actuators yezinhlelo zokusebenza ezibandakanya ukunyakaza okunembile ezindaweni ezihlanzekile. Izixazululo ezithuthukisiwe zokulungiswa kokuphakama, ukulungiswa kwe-backrest, i-trendelenburg / anti- trendelenburg nokuningi. Sekuyiminyaka engama-50, ama-actuator ethu ezicelo zezokwelapha efakazele ikhwalithi yawo efenisha yezokwelapha yabakhiqizi abahamba phambili emhlabeni. Lokho kwenza iPower-Packer ibe ngumholi womkhakha kuzixazululo ezihlangene kodwa ezinamandla zokulawula ukunyakaza.
Ukunethezeka nokuphepha kweziguli kubalulekile ngesikhathi sokuhamba. Futhi abasebenzi bezokwelapha bathembele kwimishini esebenza ngokungenaphutha ngaso sonke isikhathi. I-Power Packer Stretcher Actuator ihlala ikholi futhi ilungele ukwenza. Le actuator ethembekile, equkethe ugesi eyenzelwe ngokukhethekile yenzelwe ukusetshenziswa kuma-stretcher nakuma-trolley, futhi inezici zokuqondisa ezakhelwe ngaphakathi ukuphatha imithwalo esezingeni eliphezulu. Lokhu kusho ukuthi akukho ukwenziwa okwengeziwe noma indlela yokusekela edingekayo ekwakhiweni kwe-stretcher noma i-gurney, enganciphisa izindleko zakho zokukhiqiza jikelele. Ukuhlinzeka ngokusebenza okuhle, ipompo, isilinda, ama-valve kanye nedamu lihlanganisiwe laba yiyunithi eyodwa ehlangene, engenakondliwa. I-Power-Packer's Stretcher Actuator kulula ukuyifaka nokwakhelwa impilo ende kakhulu.
Isici se-Stretcher Actuator
Ukuthula, ukusebenza okubushelelezi
Ukusebenza okuthuthukisiwe nokunethezeka kwe-opharetha
Isikhathi sokwehla esisheshayo, esilawulwayo
Yehlisa ukugcinwa kwemishini yonke nezindleko zobunikazi babasebenzisi bokugcina
Akudingi mthombo wamandla wangaphandle
Imininingwane ye-Stretcher Actuator
Stroke ubude: 235 mm (9.3 ") 330 mm (13.0 ")
Ubude obuvaliwe phakathi kwamaphoyinti wokufaka: 285 mm (11.2 ") 349 mm (13.7 ")
Amandla okuphusha amakhulu: 4.5 kN (1,000 lbs.) 4.5 kN (1,000 lbs.)
Umthwalo omkhulu we-static: I-8 kN (1,798 lbs.) I-8 kN (1,798 lbs.)
Ubuningi bepompo kuze kube ubude obude: 14 20
Ubuningi be-torque emile ku-plunger: I-290 Nm (214 ft-lbs.) I-290 Nm (214 ft-lbs.)
Isikhathi Sokwehla: 3-6 isekhondi 4-8 imizuzwana
Isilawuli sokwehla: i-valve yokulawula ukugeleza
Ingcindezi yokusiza ingcindezi: ifakiwe
Izicelo ze-Stretcher Actuator
Kungani ukhetha i-Power-Packer
Ukunakekela ukuphepha, i-opharetha efanelekile nenduduzo yesineke
Izindinganiso eziphakeme zekhwalithi ye-IATF 16949
Ukusebenza okunokwethenjelwa ezindaweni ezihlanzekile
Langaphambilini CNHTC SITRAK Isilinda Commercial Vehicle Cab Nyakazisa System
Olandelayo: Ukusebenza kombhede wezokwelapha bushelelezi i-MK5 compact actuator ye-hydraulic equkethe uqobo
Umbhede wezokwelapha ukusebenza okubushelelezi kwe-MK5 compact compact ...